I-Lone Cone Cabin, iikhilomitha ezili-16 ukuya eMesa Verde - I-Airbnb
I-Lone Cone Cabin, iikhilomitha ezili-16 ukuya eMesa Verde
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNikki
I-Lone Cone cabin @ Kokopelli Cabins yenye yeekhabhathi ezimbini kwipropati kwaye zintsha ukususela ngo-Feb. 2018. Sijonge phambili nganye kwaye
zonke iindwendwe. Yiza uyonwabele usuku okanye ezimbini eMesa Verde, Hovenweep National park, Mcphee echibini (ngaphantsi kwe-5 min kude) Umlambo, iindlela zebhayisekile, iindlela zokuhamba intaba. Ebusika iindawo zokutyibiliza ekhephini ngaphakathi kweyure enye kwiiyure ezi-2. Iindlela ze-snowshoeing kunye nokunye okuninzi! I-Telluride, iDurango, i-Rico, i-Ouray zonke zisondele kuhambo losuku.
Ikhabhathi inebhedi enkulu kwigumbi lokulala kunye nebhedi yesofa yefuton kwindawo yokuhlala
Ukuhamba nezinye iintsapho? Usapho lwakho, kodwa ufuna indawo yakho? Jonga ekurenteni iikhabhinethi zethu zombini kwipropathi yethu. Ikhabhathi yeLone Cone ilala ukuya kutsho kwisi-4 kwaye iGoodman Cabin ilala ukuya kutsho kwisi-7.
Idolophu encinci, ukuhlala kwilizwe.
Ukuba uyasifuna, singafumaneka. Ukuba akunjalo sikushiya uyonwabele iholide yakho. Uya kufumana ikhowudi yokungena engenazitshixo yokufikelela kwikhabhini ngaphambi kokuba ufike.